Imisebenzi ye Pakistani e-UAE 🥇 【Siqashe Dubai nase-Abu Dhabi!】
Imisebenzi eDubai Recruitment etholakala eDubai nase Abu Dhabi - Imisebenzi etholakala eDubai nase Abu Abuabi!
Imisebenzi ye Pakistani e-UAE
Qala ngeNkampani Yokuqashelwa Kakhulu e Dubai
Imisebenzi yePakistan e-UAE inkampani yethu yehlukile. Simningi kangcono kunezinye izinkampani zabaqondisi e-UAE. Ngaphezu kwalokho, inkampani yethu yasungulwa e2016 futhi yasungula izinsizakalo ezimangalisayo e-United Arab Emirates. Umsebenzi wethu enkampanini yokuqashwa wabhekana nakho abashayeli bezokuqasha e-Dubai kanye ne-HR engcono kakhulu ochwepheshe emazweni we-GCC.
IDubai City Company ingenye I-Dubai ekhula ngokushesha kakhulu eMiddle East, E-Asia naseCanada. Yize lokhu kungaba iqiniso, ezinye ze Abafuna umsebenzi wase-Eshiya sisebenzisa inkampani yethu e-UAE. Abazingeli bezomsebenzi abaphezulu kwe-80% ube ngumqashi ophumelelayo e-Dubai.
Ukusungulwa kwe-Asia Recruit kuhambisana nesidingo emakethe yokuncintisana. Inkampani Dubai ukuhlinzeka ngezixazululo zokuqashwa kwabathengi abaningi abadumile. Futhi ukuhlinzeka ngamathuba wemisebenzi kanye nokukhula kwabafundi abaningi. Inkampani yethu ekhuluma njalo iyingxenye yamaqembu akhethekile ezinkampani eziseDubai City. Njengoba unikezwe la maphuzu, i-Middle East ne-Asia Recruitment amabhizinisi amaphrojekthi anamandla aphethwe e-UAE. Ngokwemvelo kusiza abantu abaningi abafuna ukuthola umsebenzi e Dubai nase-Abu Dhabi.
Ngakho-ke imisebenzi yethu yokusesha imisebenzi yenzelwe ngqo. Kulula ukuya unikeze usizo ekufuneni imisebenzi e-Dubai ye-Indian. Ngaphansi kwalezo zimo, inkampani yethu inikeza okuyingqayizivele imisebenzi kanye nezinkampani zase Dubai. Amathuba abazingeli bemisebenzi abanamakhono e-UAE abalinde abafuna umsebenzi ePakistan eMpumalanga Ephakathi.
Layisha kabusha i-Resume ye-Dubai Ngezansi!
Imisebenzi e Dubai nge Pakistani!
Silinde i-CV yakho ebuyekeziwe
Dubai ihle kakhulu futhi iyamangalisa!
Ngokuyinhloko, inkampani yokuqasha i-Dubai City Company. Ulokhu ukhonza abafuna umsebenzi hhayi nje kuphela Imisebenzi yase-Dubai yendawo yezimoto. Kodwa njengoba sekuphawulwe siyakuthatha abafuna umsebenzi emhlabeni wonke abavela eNdiya ezibandakanya abafuna umsebenzi e-Asia. Abafuna umsebenzi wasePakistan wamukelekile e-UAE futhi siyikho nakanjani ayikhawulwanga ku-UAE kuphela. Ngasikhathi sinye, sifuna abantu abaqokiwe abavela eQatar, China futhi ngenxa yalokho futhi abaphathi abavela eHong Kong. Kanye ne abafuna umsebenzi eNingizimu Afrika. Kanye ne-USA kanye ne-Singapore. Ngokwengeziwe, sisiza ama-expats aqhamuka e-Indonesia. NeMalaysia Abazingeli bemisebenzi bayamukelekile kakhulu e Dubai.
Imisebenzi yase-Dubai ene-visa ayitholakali kuphela kubakhethi bendawo. Uma ukhona kusuka ePakistan ungathola futhi isipho somsebenzi kusuka e-Dubai City Company. Ngenhloso yokufuna umsebenzi eDubai. Iqembu lethu licwaninga abazongenela ukhetho e-United Arab Emirates. Futhi ukubeka abasebenzi basePakistan ezinkampanini Zedolobha laseDubai. Sinalokhu engqondweni, sikhangelele phambili kukubekela amathuba amasha eDubai.
IDubai indawo enhle kakhulu yomsebenzi wamazwe omhlaba. Izinga lokungasebenti liphansi impela eDubai. Ngakho-ke kufanele uzame ukusebenzisa insizakalo yethu nokudlulisa usuka ePakistan. Lapho ufaka isicelo neyethu inkampani ungathola kalula eMpumalanga Ephakathi. Ukuxhumana nomphathi we-HR nabaphathi beRecruers kuyisihluthulelo sokuthola umsebenzi wendawo. Ngakho-ke musa ukuchitha isikhathi sakho futhi layisha uqhubeke namuhla.
Singabantu Inkampani Ekhula Ngokushesha Kakhulu e-UAE
Empeleni, singenye yezinkampani ezinhle kakhulu e-UAE. Sikhona futhi I-ejensi yokuqasha enelayisense ngokuphelele eDubai iqembu lethu linolwazi olukhethekile e-UAE. Abafuna umsebenzi ovela ePakistan bacwaninga Imisebenzi yeGulf. Ngemisebenzi ekhethekile yokucinga evunyelwe ePakistan abantu beza bezofuna umsebenzi e-UAE. Unalokhu engqondweni, inkampani yethu izama ukuthumela amandla Kusuka ePakistan kuye phesheya imihlahlandlela yokuphuma e-Dubai.
Ukubeka ngenye indlela, izinsizakalo zokuqashwa kweDaily City Company. Inikeza ububanzi be umsebenzi wokusiza abafuna umsebenzi ePakistan. Sisebenzisana nezinkampani ezingaphezu kwe-6,000 HR eDubai nase-Abu Dhabi. Izinsizakalo zokubekwa unomphela eDubai. Kubalulekile ukuqaphela kwethu ukubekwa emsebenzini kubandakanya izisebenzi zenkontileka. Ngokubambisana nabasebenzi besikhashana bezinkampani zasendaweni eDubai nase-Abu Dhabi. Ngaphezu kwalokho, sisebenza ku i-uber yokuqashwa kwamazwe omhlaba kanye nemakethe yamatekisi.
Ngezinsizakalo ezifanayo ezinikezwe yinkampani yethu. Ukuqola kusuka ezinkampanini ezincane zase-Asia kuya ezinkampanini ze-Emirates. Kufika ezinhlanganweni ezinkulu zamazwe ahlukahlukene emazweni we-GCC. EzinjengeBahrain Yebo nge-Qatar emangalisayo. Esethu Izinkampani zase Dubai ziqashe izimboni ezihlukahlukene. Efana namafutha & negesi e-Dubai nase-Abu Dhabi. Ngakho imisebenzi ye Pakistani e-UAE ingaba sesandleni sakho.
Nakuba lokhu kungase kube umsebenzi weqiniso wezobuchwepheshe kwezobuchwepheshe e-Abu Dhabi. I-Pakistani e-UAE inkulu kakhulu ethandwa ngabazingeli basezintambo zasemazweni angaphandle. Ngakolunye uhlangothi, umsebenzi wasebhange nowezimali wePakistan. Futhi, abaphathi abaphezulu bayatholakala futhi e-UAE. Ngesikhathi esifanayo, amathuba emisebenzi yokunakekelwa kwezempilo eDubai kunzima ukuthola. Kepha kusenokwenzeka uma ukufuna umsebenzi okulungile yinde. Ingasaphathwa eyokukhiqiza amathuba ayisisekelo. Ngokubambisana nokwakha futhi imisebenzi yezinto zokuhamba nokuhamba e-Emirates.
Ubufakazi obucindezelayo obuningi babantu abazovotelwa ePakistan. Kulula ukuthola amathuba esikhungo sezingcingo. Ungasebenzisa isibonelo Amaqembu we-WhatsApp Dubai. Kukhona izindawo eziningi lapho abasebenzi basePakistan bengabekwa khona e Dubai.
Ngasohlangothini olubi kufanele kukhunjulwe. Kakhulu ukhetho oluningi luphupha ngeDubai. Lezi zinsuku zivakashela e-Emirates ngesimo esithe xaxa ezindaweni zobunjiniyela. Ubuchwepheshe Bolwazi (IT) Imisebenzi e Dubai nge Pakistani ayatholakala uma ubhalisa nenkampani yethu. Unalokhu engqondweni ohlangothini oluhle. Ungakwazi thola ithuba elihle kakhulu lokuthengisa nokumaketha Isikhundla seKhasimende. Ezezimali kanye ne-Accounting kanye ne-Bank HR & Administration emsebenzini e-Emirates. Ngendlela efanayo, uma ufuna umsebenzi ePakistan wena we-Top Management & Strategy Corporate.
Imisebenzi e Dubai nge Pakistani
Ngamakhono amakhulu wokuxhumana kwenethiwekhi. AbasePakistan abafuna umsebenzi ezinkampanini zaseDubai. Kokunye, kuhlanganiswe nokwethu isipiliyoni semakethe emaphakathi neMiddle East. Ngakolunye uhlangothi, sibeke abaphathi bePakistan e-UAE. Iningi labeluleki bethu abanolwazi abacwaninga ngemisebenzi eDubai yasePakistan. Imisebenzi eku-inthanethi eDubai akulula ukuyithola. Uma uhlala phesheya. Kepha elinye iphuzu eliyisihluthulelo esizibophezele ukulenzela abazingeli bomsebenzi wase-Eshiya. Ukuhlinzeka nge Izinga eliphakeme kakhulu lemisebenzi yokuzingela imisebenzi kususelwa kwinqubo evamile. Kumakhasimende womhlaba wonke. Obani abasukela Ephakathi Ephakathi nase-Asia abaqashi nabafuna umsebenzi.
Ukusebenzisa izinsizakalo zenkampani yethu yasePakistan ukuthola imisebenzi emisha. Kalula nje ucwaninga futhi uxhumane nezinkampani zokuqasha. Ngaphansi kwalezo zimo, ababonisi bethu baqondisa umsebenzi. Ekhasini ngalinye le-curriculum vitae ukulingana nomuntu ngamunye ozokhethwa umsebenzi. Ekugcineni kokuhlaziywa kwezinsizakalo zezinhlelo zethu zokubekwa kwezindleko ezivela e-Asia kuya e-Dubai. Lokho kusivumela ukuba sinikeze amakhasimende ethu imisebenzi emangalisayo e Dubai. Senze zonke izinto ezibhekwayo lapho umuntu ofuna umsebenzi enza iphrofayili yangokwezifiso kuwebhusayithi yethu. Sicela ulayishe ukuze uphinde IDubai City inenqubo ekhulayo emangalisayo.
Ukubeka abaqashi base Pakistani e Dubai City
Njengoba sekuphawulwe ukuthi sinikezela wonke ama-candidate imali. Ngubani ozimisele ukusikhokhela ngenkonzo futhi angatholi umsebenzi. Insizakalo yethu enkulu yenkampani isindisa isikhathi nje. Kokubili ukhetho namakhasimende. Ukuwabeka kusuka ePakistan kuya e-Dubai. Indlela yethu ilula kakhulu ngoba ukudlulisela abaphathi abavela ePakistan baya e-Dubai. Kulula futhi kuningi kakhulu kusukela ku-2009. Ekuqondeni kwesikhathi eside kwezidingo zamakhasimende aseMpumalanga Ephakathi. Futhi ukhetho oluvela emazweni angaphandle afuna umsebenzi ku-UAE. Yilokho esikwenzayo kakhulu e-Abu Dhabi.
Ukunikezwa la maphuzu, amandla abasebenzi kanye nezithakazelo kanye nolwazi phezu kweMpumalanga Ephakathi. Sizoqinisekisa ukuthi singaphakathi ukuqasha ithalenta engcono kunazo zonke eDaily City izinkampani. Sisebenza ngaphakathi kwemikhiqizo yokuthengisa nokukhangisa e-UAE. Ukusiza futhi izinkampani ze-IT ezivela eKatar ukuthola abaqashiwe. Sisebenza nezinkampani ezimbalwa eSaudi Arabia. Ohambeni olude, sibeka abantu e-Dubai.
Imisebenzi ye Pakistani e-UAE - Inkampani yethu ingakusiza ukuthola umsebenzi kusuka ePakistan !. Layisha i-CV namhlanje! IDubai iyiDolobha lebhizinisi!
Imisebenzi ye Pakistani e-UAE ungayithola!
Okusemqoka wukuthi IDubai City Company Recruit evela ePakistan. Manje sisiza amaklayenti ezinkampanini eziwina eDubai. Singumsebenzi olawulayo nezinkampani zasePakistan. Futhi njalo ngifuna amathalente avela ePakistan. Abethuthi bethu abasha bayathuthuka imisebenzi ngokusebenza kangcono kusiza njenge-WhatsApp.! Kubasebenzi abavela e-UAE. Akunandaba ukuthi uvelaphi.
Kungakhathaliseki ukuthi kuphi expats okwamanje ephilayo. Kuningi kakhulu amathuba okuqasha amaNdiya abafuna umsebenzi. Ngaphezu kwalokho futhi abantu baseNingizimu Afrika kanye nabaseMelika bayakwazi ukuthola umsebenzi. Ngakho-ke, asikho isizathu esihle ngempela. Cishe noma yimuphi umuntu angabekwa eDubai. Abantu abasha bangabekwa e-Emirates, noma ngabe utshelwe ini. Inkampani Dubai City nakanjani ulapha ukubeka abasebenzi abasha e-UAE. Ngokuvamile, amakhasimende ethu amaningi abheka lezi zinkampani eziqashayo. I-Careerjet e-Dubai iwebhusayithi futhi Inkampani yaseMonster Gulf Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho.
Umhlahlandlela Wezokuzinakekela Kwokunakekela KwasePakistan
Imisebenzi eDubai yasePakistan kunzima ukuyithola. Ngakho-ke abantu basePakistan bathanda ukusebenzisa inkampani yethu. Izinkampani eDubai zenani eliphakeme Izisebenzi zase-Asia futhi akunankinga ne-visa. Sidale I-Dubai Guides kanye nokwazisa kwabazingeli bemisebenzi base-Asia. Abafuna usizo manje sebengasebenzisa izinkombandlela zethu ze-Dubai. Imisebenzi yePakistan e-UAE ingatholakala nathi.
Ngakolunye uhlangothi, ungakwazi sebenzisa isevisi yokuqasha umakhalekhukhwini. Baningi abantu abasha abakhona e-Dubai. Hhayi ukuthola umsebenzi, ezinye ze expats eze eDubai. Ukungatholi umsebenzi e-UAE. Yingakho inkampani yethu idala umhlahlandlela ne-Dubai imininingwane. Ukusiza abafuna umsebenzi ukuthola umsebenzi ngaphambi kokuya ngisho nase-Emirates.
Kukhona isiqondiso esiphelele sokuthuthela e-Dubai bese uthola umsebenzi. Abafuna umsebenzi abasha bamane bahlose kanzima ukuthola umsebenzi. Futhi Inkampani yaseDubai City ilapha ukusiza noma yimuphi expatriate ofuna umsebenzi. Amaqembu ethu e-WhatsApp Dubai asebenza kahle kuwo wonke umuntu. Le yindlela enhle yokubekwa e-United Arab Emirates.
Umsebenzi omusha eGulf Countries
Abasebenzi basePakistan bangakwazi thola umsebenzi futhi njengesigungu ehhotela e-Dubai. Ngakho-ke wena njenge-expat ungasesha umsebenzi emikhakheni eminingana. Kepha okuhle kakhulu Inkampani yokuqashwa ye-TCS. Ngakolunye uhlangothi, hhayi ukuqasha iDubai kuphela, kunenqwaba yamanye amazwe afuna ukubeka abantu abafuna umsebenzi. Kukhona eziningana izinkampani eSaudi Arabia ukuqasha abafuna umsebenzi.
Ukusebenza emazweni aseGulf kuhlelwe kahle kakhulu. Ngokwesibonelo, imisebenzi ekhokhelwa kakhulu yasebhange e-Dubai. Kunamathuba amaningi kakhulu kubantu abasha hhayi eGulf kuphela. Futhi, ezinye izinkampani zamazwe ngamazwe eYurophu nase-US eziqashisayo ezivela e-Dubai City. Omunye omkhulu kunabo bonke izinkampani eziqasha Dubai ziyi-Google. Kunamanye amazwe amaningi kangaka aqasha izithuba ezintsha.
Indlela esheshayo yokuthola umsebenzi e-Emirates njengenhlanhla. Ngokuvamile ukuthi abe Imfundo ye-MBA ukuqala umsebenzi. Empeleni, indlela enhle ukuthi ube nemfundo yendawo. Okuhle kakhulu kuvela eDubai noma e-Abu Dhabi University. Ngokwesibonelo ungathola umsebenzi eDubai Mall. Isebenza kahle kakhulu kubathumbi abavela kwamanye amazwe.
Imisebenzi ukuqala njengePakistan e Dubai
Enye indlela ehlakaniphile kakhulu yokuqala umsebenzi e-Dubai. Ngokuvamile kuwukuthi thola ukuqashwa kwemisebenzi e Dubai. Okwamanje kukhona okuningi abasebenzi baseNingizimu Afrika e-Dubai. Ukuqala ukufuna umsebenzi e-Dubai sincoma ngokuqinile ukuhamba ekuxoxweni. Ukuphuma nokuvuselela okubuyekeziwe futhi ukukhuluma nabaphathi bokuqasha kubonakala sengathi kuwumqondo omuhle.
Isibonelo, ukuthumela kungakwazi thola umsebenzi njengomfundisi e-Dubai. Ukunikeza lolu lwazi kufanele ukwazi ukuthi ungaphatha kanjani ukucinga komsebenzi wakho. Ikakhulukazi kwelinye la indawo engcono kakhulu abafuna umsebenzi. Futhi le ndawo ngokuqinisekile yi-United Arab Emirates. Ngakho, ngesiphetho esifushane Imisebenzi ye Pakistani e-UAE uvulekele wena. Imisebenzi yePakistan eDubai City. Ngokuvamile, siyikho ukuqasha eDubai emakethe yaseMiddle East. Faka i-CV enkampanini yethu bese ulinda ukunikezwa umsebenzi.
Ingabe ufuna ukuthola UJob e Dubai? nakuba lokhu kungaba yiqiniso singakusiza ukuba uqale entsha umsebenzi e-UAE ku-2018!
Layisha kabusha Emadolobheni Akhula Ngokushesha Kakhulu Emhlabeni! - Dubai City
Inkampani yaseDubai City manje ukuhlinzeka ngemikhombandlela emihle yemisebenzi eDubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu I-Dubay expats. Ngakho, ngalokhu engqondweni, manje ungathola iziqondiso, amathiphu kanye nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.